स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट - Pradesh Today
Homebreaking-newsस्थानीय सरकारले ल्याए बजेट
कानुनी प्रावधानमा नै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्रमा बजेट अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने भएपछि बुधबार सबै प्रायः सबै स्थानीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । दाङमा रहेका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले एकसाथ बजेट ल्याएका छन् । बजेट कति पालिकाले गत वर्षकै सेरोफेरोमा ल्याएका छन् भने कतै बढाइएको पनि छ । जिल्लाका पालिकाकाहरूको बजेटलाई सहकर्मी उमा भण्डारी र सपना बोहरा ले यसरी समेटेका छन् ।
तुलसीपुरको २ अर्ब ३४ करोड
तुलसीपुर, ११ असार । दाङको तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरले चालु र पुँजीगत गरेर २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजार बजेट ल्याएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया शर्र्माले बुधबार पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख र चालुतर्फ ६६ करोड २० लाख ६४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । यसमा पुँजीगतर्फ ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ २८ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको स्रोत पूर्तिका लागि विभिन्न निकायको सहयोगलाई अघि सारिएको छ ।
स्रोत पूर्तिका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड, युनिसेफबाट अनुदान ७५ लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ३० करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३० करोड ४५ लाख, सशर्त अनुदान विषयगत ६० करोड ३४ लाख,
राजस्व बाँडफाँटबाट १९ करोड २६ लाख ३९ हजार, समपूरक अनुदान १ करोड ४९ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समिति राजस्व बाँडफाँटबाट ३ करोड, साथै प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ७५ लाख ६० हजार, सशर्त अनुदानबाट २ करोड ३२ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड १५ हजार,
विभिन्न कोष, लगानी समेतमा १० करोड, समपुरक अनुदानमा ८० लाख, सडक बोर्डको रकम ७० लाख, नगर विकास कोषबाट २५ करोड ऋण र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकाय वा संस्थाबाट वितरित आन्तरिक ऋण तथा अनुदानबाट व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम जस्तैः स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
‘खुसी जनता, समृद्ध तुलसीपुर, हाम्रो तुलसीपुर, राम्रो तुलसीपुर’ बनाउने योजना अनुसार यस बर्ष बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख ६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा कोरोनाका कारण राजस्व संकलनमा समस्या भएको र संघ र प्रदेशबाट पनि अपेक्षा अनुसार बजेट प्राप्त हुन नसक्दा एक अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ४१ हजार मात्र आम्दानी भएको उनले बताइन् ।
उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुदृढीकरण र नगर शहरी प्रवद्र्धन लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आमा तथा नवजात शिशुको सुरक्षाका लागि सुत्केरी पोषण प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिँदै ४० लाख, मोतिविन्दुमुक्त नगर घोषणाका लागि १० लाख,
स्मार्ट ल्याव सञ्चालन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २ करोड, खेलाडी प्रोत्साहनका लागि २ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बाली संरक्षण एवं बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि ५ लाख, माछा, मासु, मह एवं दूग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण तथा फर्महरूको सुदृढीकरण १० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
टरिगाउँ विमानस्थल स्तरवृद्धिका लागि २५ लाख, उपमेयर महिला सुरक्षा आवास निर्माणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने थारू समुदायमा रहेको सिकलसेल, एनिमिया, हेमोफिलिया लगायतका रोगहरूको उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट छुट्याइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा नगर विकास कोषको साझेदारीमा आधुनिक बसपार्क टर्मिनल भवन, फलफूल व्यवसायीको साझेदारीमा आधुनिक तरकारी तथा फलफुल बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।
वडा नं ६ र ९ मा अटोभिलेज, तुलसी ट्रेड टावर निर्माणका लागि डिपिआर र डिजाइन तयार पारिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त १ करोड ३३ लाखमा वडा नं १ मा मदन भण्डारी खेलकुद मैदान र अन्य १० स्थानमा खेल मैदान निर्माण गरेको छ ।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ हजार ४५ आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये ९८.४७ प्रतिशत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ ।
सडक विकास पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनका लागि उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विकास प्राधिकरणमा ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आधार निर्माण गरेको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दै उपप्रमुख शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार पहिलो सातासम्ममा कुल बजेटको ५२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जानकारी दिइन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण ९० करोड ४४ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताइन् ।
घोराहीको १ अर्ब ८५ करोड
घोराही, ११ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि १ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९३ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ७ करोड बढेको छ । गत वर्ष नगरले १ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ६६ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
घोराही उपमहानगर उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले बजेट सार्वजनिक गर्दै चालुतर्फ १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार रूपैयाँ (५८.६० प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेकी छन् । पुँजीगततर्फ ७६ करोड ६५ लाख ७१ हजार (४१.४०) प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कोरोनाभाइरसको महामारीविरूद्ध लड्न ११ करोड ३६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्न आन्तरिक आयबाट २५ करोड, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३२ करोड ७२ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड १२ लाख १० हजार ६ सय र संघीय सशर्त अनुदानबाट ६४ करोड ७ लाख रूपैयाँ जुटाउने जनाएको छ ।
यस्तै संघीय समपुरक अनुदानबाट ७२ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ७९ लाख ७३ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड ७१ लाख १९ लाख हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ७ करोड ६८ लाख ५० हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट ३ करोड व्यहोर्ने घोेराही उपमहानगरले जनाएको छ ।
यसबाट अपुग हुने रकम २७ करोड ४० लाख ४० हजार ४ सय रूपैयाँ बैंक मौज्दातबाट व्यहोरिने घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
कृषि पेशामा जनशक्ति आकर्षित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन २ करोड ३९ लाख ३० हजार रूपैयाँ र पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न १ करोड १२ लाख ८० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सबै वर्गमा पहुँच विस्तार गर्दै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन ५३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ ५४ करोड ६ लाख १८ हजार र पर्यटकीय सम्पदा संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न १ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाभर खरको छानो विस्थापित गर्ने,
विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार एवं राहतका लागि ३ करोड ११ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन १ करोड ७३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बबईको साढे ४३ करोड
हापुरे, ११ असार । बबई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि ४६ करोड २१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रू. १५ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदान रू. १ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदान रू. १ करोड २८ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण रू. १० करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रू. ८ करोड ३८ लाख ६ हजार ३ सय ६१ रहेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण रू.५२ लाख ८२ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रू. ३३ लाख ४८ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रू.१ करोड ४८ लाख ५० हजार,
विशेष अनुदान रू. ६० लाख र सम्पुरक अनुदान रू. १ करोड ५० लाख तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोत २ करोड ५० लाख र अल्या मौज्दात रू. २ करोड ३९ लाख ७० हजार रहेको छ । बजेटमध्ये आर्थिक विकासतर्फ रू. १ करोड ८५ लाख ५० हजार,
सामाजिक विकासतर्फ रू. ४ करोड २५ लाख ९५ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ ६ करोड ७१ लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रू. ३६ लाख ५० हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ रू. १ करोड २ लाख ७५ हजार, सम्पुरक कोष संघ,
प्रदेशका कार्यक्रमहरूका लागि रू. ३ करोड, सशर्त कार्यक्रमतर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम रू. १८ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रू. ३ करोड ५८ लाख ५० हजार गरी कुल रू. ४६ करोड २१ लाख ५६ हजार ३ सय ६१ खर्च अनुमान गरिएको छ ।
कुल निशर्त बजेटमध्ये चालुतर्फ रू. ७ करोड १७ लाख ३६ हजार ३ सय ६१ र पुँजीगततर्फ १७ करोड २१ लख ७० हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ २९.४१ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ७०.५९ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विकासतर्फ रू. १ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ भने पशु विकासतर्फ रू. ७० लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । कोरोनामहामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्मकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
शान्तिनगरको साढे ४३ करोड
शान्तिनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि ४३ करोड ५४ लाख ९६ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालुतर्फ २७ करोड ८९ हजार ६ सय र पुँजीगततर्फ १६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता रवि बुढाथाकीले जानकारी दिए । उनले अहिले गाउँपालिकाले सडकलाई महत्व लिएर सडक योजनालाई गौरवको रूपमा अघि सारेको बताए ।
गाउँपालिकाले कृषि र स्वास्थ्य शाखाका लागि ५०/५० लाख, शिक्षाका लागि १ करोड ७५ लाख, कोभिड व्यवस्थापनको लागि २१ लाख, पशु शाखाको लागि २५ लाख, महिला शाखाको लागि ७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरेर तीनवटा ठूला सडकका लागि एक÷एक करोड रूपैयाँ निनियोजन गरिएको बुढाथोकीले बताए ।
लमहीको ८३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ
लमही नगरपालिकाले ८३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट ल्याएको छ । लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि नगरको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ८३ करोड ७४ लाख ५६ हजार ८७ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । पुँजीगततर्फ ४१ करोड ८९ लाख र चालुतर्फ ४१ करोड ५८ लाख ६५ हजार ८७ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
राजपुरको ५० करोड ८७ लाख
राजपुर गाउँपालिकाले ५० करोड ८७ लाख १७ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ ४० करोड ६४ लाख र चालुतर्फ १० करोड १३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन र बजारीकरणलाई महत्व दिदै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
गढवामा ५२ करोड
गढवा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को लागि ५२ करोड १८ लाख २४ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले ५२ करोड १८ लाख २४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
चालु खर्चतर्फ ९ करोड २९ लाख ७५ हजार, पुँजीगत खर्च ३६ करोड ८८ लाख ४९ हजार, बिशेष खर्च संघ–प्रदेशअन्तर्गत १ करोड १० लाख, बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बंगलाचुलीमा ५१ करोड ६३ लाख
बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पूँजीगततर्फ २२ करोड ४६ लाख अर्थात् ४४ प्रतिशत र चालुतर्फ ५ करोड २० लाखसहित २८ करोड ९९ लाख अर्थात (५६ प्रतिशत) गरी कूल जम्मा ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।